Maaddaama Jahawareerka Dhulka, Badbaadinta Waxyaabaha Lagu Horumarinayo Caadi Badan
The Isbahaysiga Missouri ee Deegaanka (MCE) waa urur madax bannaan oo muwaadiniin ah oo biyo nadiif ah, hawo nadiif ah, tamar nadiif ah, iyo jawi caafimaad leh.
MCE wuxuu la shaqeeyaa Wabiga Mississippi River Collaborative si loo ilaaliyo loona soo celiyo dhulalka qoyan. Gobolka Missouri waxa ku jira 4,8 milyan oo hektar oo qoyan oo qoyan ka hor inta aan la gaarin dejinta Yurub. Sannadkii 1980-maadkii ilaa 87 boqolkiiba, ama 4.18 malyan oo acres ah, oo ah dhul-beereedka asalka ah ayaa lagu lumay isticmaalka dhulalka kale. Iyaga oo ay wehliyaan kuwa ay wada shaqeeyaan, waxay sahamiyeen oo ay falanqaynayeen hababka dib u soo celinta dhulalka qoyan ee la waayey, taas oo hagaajin doonta tayada biyaha, deegaanka, iyo kordhinta adkeysiga cimilada iyo daadadka ee Wabiga Mississippi Basin.
Sanadka 2014, MCE waxay abaabusey kooxo kale oo deegaaneed iyo deegaan goboleed ah si ay uga hor tagaan horumarinta tafaariiqda ee ka dhacda webiga Meramec, oo ah mid ka mid ah webiyada ugu weyn ee ku soo qulqulaya Wabiga Mississippi. Horumariyaha ayaa soo jeediyay soo jeedinta.
MCE waxaa kale oo ay dib u eegis ku sameeyeen ogolaansho ay soo saareen Ciidanka Qaranka ee Engineer ee burburinta qoyaanka iyo shuruudaha gaarka ah ee mashaariicda yaraynta mashruuca - mashaariicda lagu marsiinayo dhulalka qoyan ee laga lumay burburka iyo horumarka. Waxay u direen koox cilmi-yaqaan, arday sharciga ah, iyo Agaasimahooda Nadiifinta Nadiifka ah ee qaar ka mid ah meelihii khalkhal-gelinta ahaa si loo arko haddii ruqsadaha ay soo mareen waajibaadkooda iyo haddii dhulalka qoyan ee abuuray ama dib loo soo celiyay ay shaqeynayeen sida loogu talagalay. Xaaladaha qaarkood, dhulalka qoyan ayaa la kulmay tilmaamaha, laakiin mashaariic badan ayaa ku fashilmay in ay dib u soo celiyaan dhul-biyoodka hawada. MCE waxay sii wadeysaa in ay fududeyso iskaashiga isdhexgalka si loo dejiyo qorshooyin si loo hubiyo khayraadka iyo khibradda ay u leeyihiin in ay maamulaan goobaha yareeynta.